ဖောင်တော်ဦး ပြောင်ချော်မမူးလေနဲ့ intolerant | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » ဖောင်တော်ဦး ပြောင်ချော်မမူးလေနဲ့ intolerant
ဖောင်တော်ဦး ပြောင်ချော်မမူးလေနဲ့ intolerant
Posted by ဦးေၾကာင္ၾကီး on Apr 11, 2013 in Aha! Jokes, Satire, Opinions & Discussion | 11 comments
အင်းလေး ဖောင်တော်ဦးဘုရား ရွှေဆိုင်း ကန်ထရိုက်တာနဲ့ တရားမဝင် ရွှေဆိုင်းရောင်းသူတွေ အမှုအကြောင်း သစ်ထူးလွင်မှာ ဖတ်ရတယ်။ ခွင့်ပြုချက် မရှိဘဲ ရွှေဆိုင်းရောင်းသူရဦး အချုပ်ခံရ တရားစွဲခံရတယ်။ ပြည်နယ်ဝံကျီး ကြားဝင်စေ့စပ်တယ်၊ ကန်ထရိုက်က ဂေါပကကို လွှဲချတယ်၊ အမှုကို ကြေအေးမပေးဘူး။ (ဘုရားကို အားနာစရာကြီးဗျာ) ထားပါတော့၊ ဖြစ်တုံးက ဘယ်လောက် ပြင်းထန်ခဲ့သလဲ မသိဘူး။ ဝေဖန်ချင်တာ အာမခံရတဲ့ ရွာသူနှစ်ဦး ကြမ်းပြင်မှာ ကျုံ့ကျုံ့လေး ထိုင်လို့၊ ဓာတ်ပုံထဲမှာ ဆက်တီဆိုဖာ၊ ကြမ်းခင်းကော်ဇောတွေ မြင်ရတယ်၊ လူကြီးတွေ ညှိနှိုင်းပေးတဲ့နေရာမှာ ဖြစ်ဖို့များတယ်။ မြန်မာပြည် တရားစီရင်ရေး ဗျုရိုကရေစီ ယန္တရား ပြယုဂ်တခုများလား သုံးသပ်ရင်း ဂေဇက်ရွာ မှတ်တမ်းသွင်းပါတယ်။ မူရင်းလင့်ခ် – http://www.thithtoolwin.com/2013/04/blog-post_1247.html?utm_source=BP_recent#.UWWUGaBNQdo
ဓာတ်ပုံ – သစ်ထူးလွင်
လုပ်ငန်းရှင်များ တင်ပြချက် လေထဲပျောက်သွားမည် မဟုတ်ကြောင်း ကုန်သည်ဂျီးများအသင်း ဆွေးနွေးပွဲတွင် လွှတ်တော်ငှက်ကထ ဦးရွှေမန်း မိန့်ကြားခဲ့ပြီးနောက် ချောင်းသာကမ်းခြေသို့ အပန်းဖြေခရီး ထွက်သွားခဲ့ရာ ဒီတခေါက် ၎င်းဂတိစကား ရေစုံမျောမည့်ဟန်ရှိဂျောင်း ဂေါင်းကြီးကိုယ်သေး လဗြွတ်တုတ် ခရိုနီအသိုင်းအဝန်းမှ သုံးသပ်နေဂျသည်။
မိတ္ထီလာ အရေးအခင်းသည် ကူမြူနစ်များ မီးမွှေး၍ ဖြစ်ရကြောင်း ဒီးပဲရင်းလူသတ်ပွဲ တာဝန်ခံ ကြံ့ဖွတ်လူမိုက် ဦးအောင်သောင်းမှ ပြစ်တင်လိုက်ရာ ဖြတ်လေးဖြတ် အလုပ်ခံထားရ၍ လျှပ်စစ်မီးပင် မသုံးနိုင်သော ဗကပများ ထင်းမီးပင် ထပ်မံဖြတ်တောက် ခံရဖွယ်ရှိကြောင်း စီအိုင်အေ ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့မှ ခန့်မှန်းပြောဆိုသည်။
သမီးလေး ရတနာမိုင်မှ သင်္ကြန်ပွဲတော်အတွင်း လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဝတ်ရတာ သဘောကျဆို၍ အတွင်းခံ အဝတ်အစား အရောင်းဆိုင်များ စိတ်ပျက်သွားသော်လည်း မိုးကာအင်းကျီ ကုမ္မဏီတခုမှ သင်္ကြန်ခြစ်ကြည်ရေး သံတမန်ခန့်ရန် ကမ်းလှမ်းထားသည်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံမှ ဆောက်လုပ်ပေးမည့် ရန်ကုန်ဆေးရုံသစ်ကြီး ကုတင်မည်မျှဆန့်မည် မသေချာသေးသော်လည်း လိုအပ်မည့် ကုတင်များ အလုံအလောက် ရှိစေရန် ဝန်ထမ်းရွေးချယ် လေ့ကျင့်ရေးအဖွဲ့မှ လက်သမားဆရာ ဦးစီးအရာရှိ၁၀ဝ ခေါ်ယူမည်ဖြစ်သည်။ ဆေးရုံသစ်စီမံကိန်း အကြံပေးဆောင်ရွက်သွားမည့် ဗြိတိန် ကြက်မရေး ဝန်ကြီးဟောင်း သမားဒေါ်ဂျီး လော့ဒ်ဒါဇီသည် စက်ရုပ်တွင်ဖြစ်ပွားသော ကင်ဆာရောဂါ ကုရာတွင် နာမည်ကြီး ခွဲစိတ်ပါရဂူဖြစ်ပြီး တရုတ်သံရုံးကမူ စက်ရုပ်တွင် ဖြစ်ပွားသော ပြန့်ပွားတတ်သည့် ကင်ဆာရောဂါဆိုသည်မှာ သံချေးတက်ခြင်း မျှသာဖြစ်ကြောင်း ဝေဖန်လိုက်သည်။
မန်လေးသင်္ကြန်အတွက် လုံခြုံရေးအင်အားကို ယခုနှစ်တွင် တိုးမြင့်ထားရာ မန်းလေဂေဇက်မှ ဆရာ၊ဆရာမများ ဖြစ်သော ဦးပေါက်၊ ကပေ၊ ကရဲစည်၊ ကခင်ခ၊ ဆွိမမ၊ ဗုံဗုံ တို့လွန်စွာ ကြွတက်နေကြသည်။ ယခင်နှစ်များတွင် ပလုံဘီယာဖြင့် စီးပွားဖြစ်သွားသူ ကပေမှ ကိုယ်ပိုင်ခြေလက်မျက်စိနှာခေါင်းတို့အား အသုံးပြုပြီး ရေပက်ခံလာ သမီးလေးများအား လုံခြုံရေးအလို့ငှာ ထိတွေ့ကိုင်တွယ် ပွတ်သပ်နမ်းရှုံ့၍ စကင်န်ဖတ် စစ်ဆေးသွားမည်ဟု သိရသည်။
ဖောင်တော်ဦးဘုရားကကိစ္စ ဧရာဝတီမှာဖတ်လိုက်ရတယ်… ရုပ်ပျက်လိုက်တာဗျာ…
ဂေါပကလုပ်စားသူများ ရှက်တတ်ရင် ရှေ့ကအင်းလေးကန်ထဲ ခုန်ချပြီး သေလို့ရတယ်..
အဲ့သည်နေရာမှာ စပြီးပြောရမှာက ဘုရားကို ကန်ထရိုက်ဆွဲတဲ့ကိစ္စဘဲဗျ
ဘုရားတွေ တန်ခိုးကြီးလေ ကန်ထရိုက်စာမိလေဘဲ
ခံယူကြပုံခြင်းတော့ ဘယ်လိုနေကြသလဲသိဘူး ဘုရားတွေမှာရှိတတ်ပါတယ်
ခုကိစ္စမှာဆိုရင် ကန်ထရိုက်က ကန်ထရိုက်ယူပြီး မူမိုင်ရောင်းချခွင့်ယူထားတော့
ဟော !!!!!!!! ငတ်တဲ့လူက တစ်ပိုင်တစ်နိုင်ဝင်ရောင်းတော့ သူ့ကံထရိုက်ဘစ်ဇနစ်ကြီးပျက်တော့
ဘုရားလာဖူးသူတွေ ကျုပ်ရဲ့ကန်ထရိုက်က ပန်း ဆီမီး နံ့သာတွေနဲ့ဘဲ ပူးဇော်ခွင့်ရမယ်
ကျုပ်ရဲ့ကန်ထရိုက်က ပန်း ဆီမီး နံ့သာတွေကလွဲပြီး အိမ်ကယူလာတယ်ဆိုရင်
ဘုရားပေါ်မှာ ကျုပ်ရဲ့ ကန်ထရိုက်တာ အမှတ်သားမပါတဲ့ ပန်း ဆီမီး နံ့သာတွေ လက်ဝယ်ရှိသူဆိုရင်
ခွေးမသားစုန်းပြူး ဘုရားဒါယကာ နဲ့ ဘုရားကန်ထရိုက်တာတွေ
ခင်ဗျားတို့ဖင်ကုန်းပြီးဘုရားကိုရှိခိုးနေတဲ့အချိန်မှာ ဘုရားမျက်နှာတော် တစ်ဖက်လွဲလိုက်တယ်ဆိုတာ
သဂျန်မှာတော့ သူတို့လေးတွေ လွပ်လွပ်လပ်လပ်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဝတ်စုံလေးတွေဝတ်ဂျဘါဇေ
ရွှေတိဂုံမှာ ကန်ထရိုက်ယူရင် လင်းနို ့ကြွက်ချေးကန်ထရိုက်လည်းရှိသေးတယ်
တနှစ်ကို ၁၄ပေ ကန်တာသုံးစီးတိုက်လောက်ရပါတယ် ။
တကယ်ပြောတာပါ မယုံမရှိပါနဲ ့
အဲဒိ ဘုရားကို ကန် ထရိုက် ဆွဲတဲ့စနစ်ကိုဖျက်ပစ်ဖို့ စိတ်မကူးကြဘူးလားမသိ…..။ နားရင်းရိုက်ချင်စရာတော်တော်ကောင်းတဲ့ စကားလုံးပဲ…။ ဘုရားကန်ထရိုက်တဲ့………။
ဖောင်တော်ဦးသွားတုန်းက ပြင်ပရွှေဆိုင်းတွေ ကပ်လို့မရကြောင်း လော်ပစီကာကြီးနဲ့ မရပ်မနားကြေညာနေတာ ကြားခဲ့ရတယ် … ရွှေဆိုင်းပါလာခဲ့ရင်လဲ အလှူခံပုံးတစ်ခုထဲ ထည့်ရတယ် ..
ကြားရတာ တစ်မျိုးကြီးဖြစ်ပြီး စိတ်ပျက်စရာလဲ ကောင်းပါတယ် ..
ဪ .. လောဘ .. လောဘ …
(မန်လေးသင်္ကြန်အတွက် လုံခြုံရေးအင်အားကို ယခုနှစ်တွင် တိုးမြင့်ထားရာ မန်းလေဂေဇက်မှ ဆရာ၊ဆရာမများ ဖြစ်သော ဦးပေါက်၊ ကပေ၊ ကရဲစည်၊ ကခင်ခ၊ ဆွိမမ၊ ဗုံဗုံ တို့လွန်စွာ ကြွတက်နေကြသည်။)
ဒက်ဒီကြောင် ဒက်ဒီတမီးလေး ပူစီဗုံက ရိပ်သာဝင်မှာ ဒီညနေ ဂိုး ပြီ အိမ်မှာကောင်းကောင်းနေခဲ့ ဥပုပ်လေးဘာလေးစောင့် ကြောင်သူတော်ဂျီး လုပ်ပြီး လာသမျှကြွက် ဖမ်းစားမနေနဲ့ ပုလိပ်ရောဂါ ဖြစ်နေတယ် ဒဒိထားးး
အေဘီစီ စတောက် ဘီယာနဲ ့ဖီးကြမ်းငှက်ပျောသီး နဲ ့ကို ဧည့်ခံကျွေးမွေးဦးမှာ
ကန်ထရိုက် မဆွဲပါဘူးတဲ့ . . . . . အလှူငွေက မသေချာ . . ဆယ်ကြီးပိုင်း (ရာသေးပိုင်း ချီ) ရှိတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို ပေးဖို့ လစာအတွက် ဘယ်လို စဉ်းစားကြမလဲဗျ . . ။ ကန်ထရိုက် တိုင်း . . မြတ် မယ် ထင်နေသလား လို့ မေးကြည့်ချင်ပါရဲ့ . . .။
နတ်ပြည်နဲ့.. ငရဲကြား.. အသင်လူသား.. ဘယ်သွားရမယ်ဆုံးဖြတ်ပေးနေကြတဲ့.. နတ်ငရဲကန်ထရိုက်သမားတွေကို.. မျက်တောင်မွှေးနဲ့ညိရက်နဲ့..မမြင်ကြဘူးဖြစ်နေကြတယ်ပေါ့..
ကွန်မြုနစ်တွေက..” ငရဲနဲ့ခြောက် ဘုံနဲ့မြှောက်”လို့ပြောခဲ့ကြတယ်..။
ဗကပတွေကို”အထု”ပြမှ.. ဦးအောင်တောင်း.. ယူအက်စ်က”ဥ”ရမှာပေါ့..
ဒေါ်စုက နိုင်ဂံခြားရောက် ဆေးပညာရှင်တွေပြန်လာဖို့ခေါ်တယ်..
ကလေးတွေပညာရေးကျ.. အခုထိ. .”ဘက”ပညာရေးနဲ့ပစ်ထားတုံး…။
ကြည့်ရတာ.. တိုင်းပြည်အနာဂါတ်ထက်.. လူကြီး(အတက်ကြီးသူ)တွေအနာဂါတ်ပိုကြည့်နေရသလား.. လို့..
ဘုရားရုပ်ပွားတော်၊ စေတီ တို့ကို ရွှေချတယ်ဆိုတာ
အဲသလို ရွှေချလို့ ပိုမို တင့်တယ် သပ္ပါယ်လာရင် ဘုရားဖူးသူတွေ ကြည်ညိုသဒ္ဓါ ပိုဖြစ်အောင်
အဲသလို ဘုရားဖူးသူတွေ ကြည်ညိုသဒ္ဓါ ပိုဖြစ်အောင်ပြုခြင်းအားဖြင့် မိမိမှာ ကုသိုလ်ရအောင် ဆိုရင်
ကောင်းပါတယ်။ မှန်ပါတယ်။ သွယ်ဝိုက်ပြီး သာသနာကို ထောက်ပံ့ရာရောက်လို့
သွယ်ဝိုက်ပြီးရတဲ့ ကုသိုလ်အသေးစားမျိုး ရနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ရွှေကပ် လိုက်လို့ ပိုတင့်တယ်မလာဘူး ၊ ပိုသပ္ပါယ်မလာဘူး ဆိုရင်တော့ …….
ပိုဆိုးတာက တစ်ချို့ ဆင်းတုတွေမှာ-
ကိုယ်ရွှေကပ်လိုက်လို့ ပိုရုပ်ဆိုးသွားတယ်ဆိုရင်တော့ ……….